विवाह भएको तीन दिनसम्म शौचालय जान नपाउँने अनौठो चलन! – Ujyaalo Patrika
विवाह भएको तीन दिनसम्म शौचालय जान नपाउँने अनौठो चलन!
संसारमा बिभिन्न परम्परा र रितिरिवाजहरु छन्। जुन कुरा सुन्दा नै हामीलाई अचम्म लाग्दछ। इण्डोनशियाको टिडन्ग नामक आदिवासी समुदायमा ववाह गरेको तीन दिनसम्म गरेपछि ट्वा,इलेट नै जान नपाइने विचित्रको परम्परा छ। उक्त समुदायमा विवाह गरेको तीन दिनसम्म बेहुला बेहुलीलाई शौचालय जाने अनुमति छैन।
विवाहपछि नयाँ दुलाहा दुलहीले ट्वाइलेट नै बार्नुपर्ने यो संस्कारका पछाडि केही कारणहरु छन्। विावहको तीनन दिनसम्म यदि बेहुला बेहुलीले घरको ट्वाइलेट प्रयोग गरेमा भाग्य बिग्रिने र बिहे धेरै नटिक्ने, कुनै अप्रिय घटना हुने वा कसैको मृ, त्यु हुन्छ भन्ने धारणा छ। ट्वा,इलेट जान नपाउने भएपछि नयाँ बेहुला बेहुलीलाई विवाहको तीन दिनसम्म खानेकुरा पनि कम दिइन्छ। तिन दिनपछि यो परम्परा पूरा भएसँगै बेहुला बेहुलीले नुहाइधुवाइ गर्दछन् र आफ्नो नयाँ जिन्दगीको शुरुवात गर्दछन्।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको उपस्थितिमा हिमानी ट्रष्टद्वारा झापाको भद्रपुरमा राहत वितरण (तस्वीर)
पूर्वराजपरिवारद्वारा सञ्चालित हिमानी ट्रस्टले झापाको भद्रपुर-२ गौरीशंकरमा राहत वितरण गरेको छ ।
Previous एकै जना पुरुषको १३ ओटी श्रीमती, ती १३ ओटै श्रीमती एकैचोटी गर्भवती
Next पो’र्नह’बमा १७-१८ वर्षका नेपाली किशोरीहरु यस्तो अवस्थामा देखिन थाले